အမှောင်စနစ်၊ "အမြဲတမ်းဖွင့်" mode သို့မဟုတ် iOS 12 အယူအဆရှိ Powerbar Homebar | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 12 အယူအဆရှိအမှောင်စနစ်၊ "အမြဲတမ်းဖွင့်" mode သို့မဟုတ်စွမ်းအင်သုံး Homebar
Jordi Gimenez | | iOS ကို, iOS 12
iPhone 8 မော်ဒယ်သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ စာဖတ်သူများနှင့်သဘောတရားများလက်တစ်ဆုပ်စာပေါ်ထွက်လာသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ Device ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုတရားဝင်အတည်ပြုပြီးတာဖြစ်လို့ OLED မျက်နှာပြင်လို iPhone အသစ်ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်ဆိုချက်များနှင့်အယူအဆများကိုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသူများဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားပွဲပေါ်မှာရှိသည် iPhone Pro တစ်ခု၏ iOS 12 အယူအဆApple ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အယူအဆတစ်ခု။
John Calkins သည်ဤအယူအဆကိုဖန်တီးသူဖြစ်ပြီး၎င်းတွင် iPhone Pro အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမိုက်မဲသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမြင်နိုင်သည် အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော HomeBar နှင့်အမြဲတမ်းရွေးချယ်စရာ Samsung Galaxy S8 ကဲ့သို့သောပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် OLED ဖန်သားပြင်အသစ်သည် iPhone သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ဤအယူအဆတွင်ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။
ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်ယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်သည် iOS 12 ကိုမှောင်မိုက်တဲ့ mode မှာတိုက်ရိုက် အဲ့တာက Apple ပစ္စည်းကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စတိုင်ကျစေတယ်။ သတိပြုသင့်သည်မှာဤအချက်များအားလုံးသည် Calkins မှ PhotoShop တွင်ပြုလုပ်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင် Apple မှပြုလုပ်ထားသည့် interface ကိုကျွန်ုပ်တို့မရင်ဆိုင်ရပါ။ iOS 12 ၏ဤအယူအဆ၏အသေးစိတ်မြင်ကွင်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချန်ထားသည်။
ဖုန်းမျက်နှာပြင်ရှိအသိပေးချက်များ၊ ဖုန်းကိုချိတ်ဆွဲရန်၊ စပီကာကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်အခြားရွေးစရာများထဲမှဂဏန်းခလုတ်ခုံကိုသုံးရန်ရွေးစရာများပါရှိသော HomeBar ။ Touch ID လို့ခေါ်တဲ့ home ခလုတ်ရဲ့ဘေးမှာရာသီဥတု၊ ပြက္ခဒိန်နဲ့အလားတူအချက်အလက်တွေကိုမြင်ရတဲ့ screenshot ကိုလည်းတွေ့တယ်။ ငါတို့တွေ့တယ် အနာဂတ်မှာအက်ပဲလ်ထည့်နိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချို့ iOS တွင် Cupertino မှသူများသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်သောကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များရှိမည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့က Apple အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဤ၏အပိုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ချင်လျှင် ယေဘုယျအမှောင်မုဒ်တွင် iOS 12 အယူအဆ John Calkins ကဖန်တီးပြီးသူတို့ကိုသင်တွေ့နိုင်တယ် ဒီ link ကိုတိုက်ရိုက်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 12 အယူအဆရှိအမှောင်စနစ်၊ "အမြဲတမ်းဖွင့်" mode သို့မဟုတ်စွမ်းအင်သုံး Homebar
ufffff ဒါကို Samsung ကလုပ်တယ်၊ မင်းလက်ထဲမှာတော့ torch တွေရှိနေပြီ။ ငါကပိုမပြောပါကအားလုံးပြောကြသည်! ဟက်တာဟက်တာဟက်တာဟက်တာဟက်တာဟက်တာ
ငါစိတ်ကူးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ တကယ်အောင်မြင်တယ်၊ အမှန်တရားကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
Pinterest ကို zoom feature သို့ pinch ထည့်ခြင်းဖြင့် update ပြုလုပ်သည်
Apple က iOS6ဗီဒီယိုအသစ် ၆ ခုကို၎င်း၏ YouTube channel သို့ဖြည့်စွက်သည်